BLCH Pneumatic Science and Technology Co. Ltd waxaa la aasaasay bishii Ogos 2004, waxay ku taalaa aaga warshadaha horumarinta dhaqaalaha ee YUEQING. Shirkaddu waxay ka kooban tahay aag 24000 ah㎡, oo leh 5 saldhig oo wax soo saar leh oo ka badan 300 oo shaqaale ah. Waa shirkad aan gobol ahayn oo ku takhasustay R&D, wax soo saarka, iibka iyo dayactirka adeegga qaybaha pneumatic.
Waxaan hadda bixinnaa shan shey oo pneumatic taxane ah, sida daaweynta isha hawo, rakibida pneumatic, dhululubada, kalluumeysatada solenoid, tuubbada PU iyo qoryaha hawada, ku dhowaad 100 moodal iyo kumanaan shey adduunka oo dhan. 2015 shahaadada nidaamka maaraynta deegaanka iyo CE markig ee EU. Sidoo kale waxaan nahay National Tech-Enterprise, Heerarka Qaranka ee soo koraya urur.
Waxaan had iyo jeer qaadannaa "Tayo Sare" sida ugu muhiimsan, qaybaha muhiimka ah dhammaantood waxaa lagu soo saaraa si otomaatig ah, taas oo si wax ku ool ah u damaanad qaadeysa tayada xasilloon ee qalabka. waqti dheer ayaan ku qaadaneynaa tijaabinta nolosha dheer waxaanan ku adkeysaneynaa in shey walboo hal mar ah la hubiyo lana tijaabiyo kahor dhalmada. Dhanka kale, "Adeegga Kadib" waa ballanqaadkeenna, maxaa yeelay waxaan ognahay in macaamiisha ay si buuxda u fahmi doonaan dabeecaddeenna mas'uuliyadda ah ayna abuuri doonaan xaalad guuleysi badan iyo ka sii badanba.
Aqoon isweydaarsiga Golaha FRL
Aqoon isweydaarsi toos ah
Workshop Mashiinka Birta
Aqoon-isweydaarsiga Hubka ee Robotic
Tijaabinta Qalabka Pneumatic
Alaabada Pneumatic Warehosue